दुई समलिay्गीको पहिलो यौन स्वाद
वाह सैन्य अस्तित्व शिकारी lvl 19 twink » भिन्टेज Cum दुई समलिay्गीको पहिलो यौन स्वाद
लग इन गर्नुहोस् वा साइन अप गर्नुहोस्। हिप फोरमहरू। के तपाईंले पहिलो द्विलिंगी अनुभवको बखत "निल्नुभयो"? शीर्षकले यो सबै भन्छ, तर समान लिंगको अर्को व्यक्तिसँग तपाइँको पहिलो उभयलिंगी अनुभवको क्रममा, कुनै फिर्तीको बिन्दु बितेर जाने प्रारम्भिक पल पछि, तपाइँले एक क्षणको लागि ती व्यक्तिलाई रस निगल्न हेसिट गर्नुभयो - थूक, वा भर्खर एक अनुहार प्राप्त गर्न?
मेरो धेरै पहिलो स्वाद
निफ्टी संग्रह: युवा-साथी / पहिलो स्वाद को सह
मेरो दिमाग फर्कियो जब म सत्रह वर्षको थिएँ, मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी र म एक अर्कालाई झुक्याउँथे। एक पटक र एक पटक मात्र, मैले उनलाई लगभग तीस सेकेन्डको लागि चूसें। मैले रोकें किनकि म यस बारे डराएको र अलमल्लमा परेको छु। तर, त्यस दिनदेखि, म यसको बारेमा धेरै सोचें। यो मेरो विचारहरुमा हरेक पल्ट जब मैले ठट्टा गरीयो। म सख्त कसैलाई बन्द गर्न चाहन्थें, र त्यो आवश्यकता धेरै मेरो सम्बन्धविच्छेद र मामिला पछि बढाइएको थियो। मैले आफ्नै कम खाने बारेमा पनि सोचेँ, तर हरेक चोटि मलाई संभोग भयो, मैले यसको स्वाद लिने सबै इच्छा गुमाएँ।
यो समलि .्गी पुरुष कथामा मेरो पहिलो प्रयास हो। मैले यो छोटो राखेको छु, तर आशा मीठो छ। कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोस् यदि तपाइँ उही को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ, सायद केहि लामो र अधिक समयको साथ अर्को पटक।
यो एक्लै घरमा एक्लै बोरिंग रात को रूपमा शुरू भयो। म साँझ जाँदा बाहिर गएँ र डिसेम्बर रातको जाडोमा मलाई न्यानो राख्न एक छ प्याक किन्नुभयो जबकि म च्याट कोठामा जाँदा च्याट कोठामा जाँदा नेटमा तातो साइबर मिति खोज्दै थिएँ। थोरै मलाई थाहा थियो, यो रात मेरो पीसीको साथ एक्लै अन्य रातहरू जस्तै हुने छैन। यो रात साँच्चै विशेष हुने थियो!
ट्यागहरू: दुई + यौन + पहिलो + स्वाद + को + सम + समलि .्गीको
प्रजनन ट्विink्क क्विक कम डम्प